Mark Ching – Ninka halista ugu bareeray samata-bixinta Eeyaha hilibkooda laga ganacsado. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Mark Ching – Ninka halista ugu bareeray samata-bixinta Eeyaha hilibkooda laga ganacsado.
Posted by: radio himilo April 19, 2017
Muqdisho – Taniyo sanado dhowr ah, Mark Ching wuxuu ahaa ganacsade ku bixiya waqtigiisa iyo ilihiisa dhaqaale dib u xanaaneynta Eeyaha dulman ee Los Angeles – isaga oo gabaadna siinaya. Hayeeshe, wuxuu hadana aad ula socday ka ganacsiga hilibka Eeyaha ee dalka Shiinaha ka jira. Kadibna markii uu indhihiisa ku arkay sida loola dhaqmayo, wuxuu qaatay inuu soo badbaadiyo sida badan ee ah tirada Eeyaha ku nool qaaradda Asiya – xattaa haddii tani ay ka dhigan tahay in naftiisa ay halis u gasho.
Previous: Leicester oo laga reebay tartanka UCL
Next: Alves oo shaaciyay wixii uu ku yiri Neymar.